Toeram-pisakafoanana sy fisotroana kafe - Easy Multi Display - Rindrambaiko Digital Signage
Trano fisakafoanana, kafe, trano fisakafoanana haingana
AZO ATAO NY FANDAHARAHANA AZY
Na manana toeram-pisakafoanana eny amin'ny tsenan'ny besinimaro ianao na toeram-pisakafoanana haingana, dia afaka manampy anao hampiseho ny orinasanao sy ny menuo ny Easy Multi Display, ary manampy azy io tsy hiatrika ny valalabemandry.
FANTARO NY FINOANAO
Atolory ny mpitsidika anao mijery izay tadiavin'ny trano fisakafoanana anao, asehoy ireo entana fivarotana fividianana lafo indrindra, na lovia vaovao.
Miangavy mpiantsena hiditra ao amin'ny sakafonao miaraka amin'ny fampisehoana sary manaitra. Omeo tsiro ny mpandalo amin'izay atolotra.
Fandroahana sakafo atoandro na fisakafoanana manokana? Ampifandraiso amin'ny mpanjifanao mety misy tolotra sy fifanarahana manokana.
Araka ny lazain'ny anarana dia mora ampiasaina ny EMD. Tsy mahalala na inona na inona momba ny solosaina aho. Miaraka amin'ny EMD dia misy vahaolana voagejanina tsara ho an'ny birao nify.